Misoro yeNhau, 09 Chivabvu 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 09, 2019
Nyanzvi munyaya dzemitemo nezvematongerwo enyika dzopesana pane zvinoreva mutongo wakatarirwa bato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, iro rinonzi nevakawanda ratarisana nenguva yakaoma zvichitevera mutongo wedare uyu usiri kucherechedza VaChamisa semutungamiri webato iri.
Misoro yenhau, Chitatu, Chivabvu 8, 2019
Dare repamusoro reHigh Court nhasi rapa mutongo wekuti kudomwa kwemutungamiri weMDC Alliance VaNelson Chamisa kwaisava pamutemo uye sarudzo dzeExta-ordinaary Congress dzinofanira kuitwa mukati megore.
Misoro yenhau, Chipiri, 07, 2019
Gurukota rezvekuuritswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inokoshesa basa rinoitwa nevatori venhau uye iri kuvandudza mitemo kuti vashande vakasungunuka.
Misoro yenhau, Muvhuro, Chivabvu 6, 2019
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa voenda kuBotswana kunosangana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuSADC kuti vazeye nyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou.
Misoro yeNhau, China, Chivabvu 02, 2019
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa votaura nemadzishe kuManicaland nenyaya yekuti vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai vatamiswe asi vamwe vachigunun’una kuti havazowane muripo kubva kuhurumende.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chivabvu 01, 2019
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinocherechedza zuva revashandi pasi rose kuDzivaresekwa muHarare nedzimwe nzvimbo munyika yose veruzhinji vachiti vari kuomerwa nehupenyu.